I-china indlela yokusebenzisa abakhiqizi be-lancet yegazi nabaphakeli | EMUVA PHAMBILI
Ungayisebenzisa kanjani i-Press Blood lancets?
Manje izinsuku abantu abaningi ngokwengeziwe banaka kakhulu impilo yabo bese beya esikhungweni Sezokwelapha ukuze banikeze impilo yabo ukuskena ngokugcwele. Ngenxa yalesi sizathu isidingo se-lancet yegazi izikhathi ezi-3 kunakuqala. Uyisebenzisa kanjani i-lancet yegazi yaba yinto ebaluleke kakhulu. Ukuyisebenzisa kanjani i-lacet yegazi ngendlela eyi-saftly sekubaluleke kakhulu.
Manje ake sifunde ukuthi singalusebenzisa kanjani uhlobo lokucindezela lwe-lancet yegazi.
Ungayisebenzisa kanjani i-Press Blood Lancet
Isinyathelo 1 Khipha ikepisi lokuvikela bese ulahla bese ugcina ikepisi endaweni enhle.
Isinyathelo 2 Beka i-lancet fimly ngokumelene nendawo yokubhoboza ukuze kusebenze. Ungasusi idivayisi kuze kuzwakale ukuchofoza okuzwakalayo.
Isinyathelo 3 Lahla i-lancet esetshenzisiwe esitsheni esifanelekile se-sharps esine-cap ku-lancet.
Cindezela 2 lancet yegazi
Isinyathelo 1 Sonta ikepisi lize lihlukane kalula nomzimba we-lancet. Musa ukudonsa.
Uma uyidonsa, inaliti izokhishwa futhi i-lancet isetshenziswe i-lancet;
Isinyathelo 2 Isinyathelo 2 Beka i-lancet fimly ngokumelene nendawo yokubhoboza ukuze kusebenze. Ungasusi idivayisi kuze kuzwakale ukuchofoza okuzwakalayo.
Isinyathelo 3 Lahla i-lancet esetshenzisiwe esitsheni esifanelekile se-sharps. I-lancet esetshenzisiwe ingaba negazi eliningi kuyo.
Imininingwane ye-ORIENTMED blood lancet
I-ORIENTMED ingahlinzeka ngama-lancet ehlukene egazi. I-Twist lancet, cindezela i-lancet, izinhlobo ezahlukahlukene zama-lancets aphephile, ne-Heel lancet. Ama-lancets egazi asevele asitholile isitifiketi se-CE ISO ne-FDA.
Ngokuya ngekhwalithi enhle kakhulu namanani afanele, sizuze idumela elinomthwalo wemfanelo ezifundeni eziningi ezahlukahlukene, njengeGerman, France, Kazakhstan, Russia, Kuwait, Australia, South Africa, United States, South America nokunye. Ikakhulukazi eChile naseMid-mpumalanga, sinamakhasimende amaningi.
60mm Petri Isitsha, Alahlwayo Gloves nitrate Powder Mahhala, Ikhava Yezicathulo Ezokwelapha, Idrayivu ekhipha ikhava yesicathulo, Kn95 Alahlwayo Face Vuvu, Amakhithi Wokuhlola Ukukhulelwa,